Mogadishu Journal » 2018 » October » 10
Mjournal :-Wararka ka imanaya magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya in boqolaal ka tirsan ciidamada Milatariga ay bilaabeen gadood iyagoo ka cabanaya mushaar la’aan. Ciidamadan ayaa la sheegay in ay ahaayeen kuwo ka howlgalayay magaalada Burayu ee ku taal gobolka...
Antonio Griezmann oo sheegay Laacibka u Qalmo Sanadkan jaa,izada Ballon D’or
Laacibka Kooxda Atletico Madrid weerarka ugu ciyaara Antonio Griezmann ayaa sheegay in ciyaaryahan u dhashay xulka France uu u qalmo abaalmarinta Ballon D’or. Antonio Grierzmann ayaa aaminsan in sanadkan laacibka ugu wanaagsan aduunka uu ku guuleeysan doono ciyaaryahan u dhashay...
Chelsea oo wada hadallo Ay qanadaraaska lafuraysa Eden Hazard
Kabtanka xulka qaranka Belgium Eden Hazard ayaa tan xagaagii lasoo dhaafay lala xiriirinayay in uu isaga dhaqaaqo kooxda Chelsea. Weeraryahankan ayaana qarin sida uu u doonayo in uu kubiiro kooxda kadhisan caasimadda Spain ee Real Madrid. Yeelkeede, Daily Express ayaa shaaca...
Mjournal :-Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, ayaa maanta qasriga boqortooyada kula kulmay boqorka dalka Sucuudiga, Boqor Salman bin Abdulaziz Al Saud. Ra’iisul Wasaare Kheyre iyo Boqor Salmaan ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka laba geesoodka ah ee Soomaaliya...
Mjournal :-Maxkamadda Ciidamada qalabka sidda ayaa xukuno kala duwan ku riday xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab oo horay ay gacanta ugu soo dhigeen Ciidamada Ammaanka dowladda Soomaaliya. Maxamed Cabdi Salaad Nuur iyo Gacal Maxamed Cali Maxamed ayaa loo heystaa in ay ka wada...
Mjournal :-Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre, ayaa maanta qasriga boqortooyada kula kulmay boqorka dalka Sucuudiga, Boqor Salman bin Abdulaziz Al Saud. Ra’iisul wasaare Khayre iyo Boqor Salmaan ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka laba...
Mjournal :-Ugu yaraan 40 ruux ayaa ku dhimatay shil bas oo ka dhacay waddada isku xirta magaalada caasimadda ah ee Nairobi iyo magaalada Kisumu ee dhanka galbeed ku taalla, baska ayaana waddada ka baxay sida ay booliisku sheegeen. Dad badan ayaa la sheegay in ay dhinteen markii...
Mjournal :-Maxamuud Xayir Ibraahim Wasiiru dowlaha Wasaaradda Maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa raaligalin ka bixiyay jawaab uu dhawaan bixiyay oo ay ka caroodeen Shacabka “May-ga”. Maanta kulanka golaha shacabka waxaa jooga 156 Xildhibaan, ajendaha waa xisaab xirka dowladda...
Mjournal :-Jubbaland ayaa waxa ay sheegtay inay hawlgal ku bur burisay saldhigyo ururka Al Shabaab ay ku lahaayeen degaano ka tirsan gobolada Gedo iyo Jubbada Hoose. Wasiiru dowlaha amniga Jubbaland Maxamed Cabdi Kaliil ayaa wuxuu sheegay in sidoo kale ay burburiyeen fariisimo...
Mjournal :-Cali Gacal Casir oo xildhibaano horey ugu shiray magaalada Dhuusamareeb ay sheegeen inay xilka ka qaadeen ayaa wuxuu sheegay in dhawaan magaalada Cadaado ay ka dhaceyso doorashada madaxweynaha Galmudug. Arrintan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii shalay xildhibaano...